I-50 YEENWELE EZAZIWA KAKHULU ZAMADODA (I-2021 YOKUSIKA KUNYE NEZITAYILE) - IINWELE ZAMADODA
Iinwele ezidumileyo ezingama-50 zamadoda
Eyona Iinwele Zamadoda Iinwele ezidumileyo ezingama-50 zamadoda
Ukuba ujonga iinwele zamadoda zamva nje ngo-2021, uya kuthi ke uzithande iindlela ezintsha ezipholileyo zokucheba iinwele apha ngezantsi. Uninzi lweenwele ezithandwayo ziyaqhubeka ukuba mfutshane…
Ukuba ujonga iinwele zamadoda zamva nje ngo-2021, uya kuthi ke uzithande iindlela ezintsha ezipholileyo zokucheba iinwele apha ngezantsi. Uninzi lweenwele ezithandwayo ziyaqhubeka zibe mfutshane ngaphantsi kwaye ukubuna ukusika kumacala nge Phakathi ukuya iinwele ezinde ngaphezulu. Ngelixa iinwele ezimfutshane ziqhubeka nokuba zezesitayile kunye nobudoda, isitayile esifanelekileyo kuwe siya kuxhomekeka kubude beenwele zakho nohlobo. Nangona i iinwele ezilungileyo lo nyaka awukhange ube mhle kwaphela, ukungafani okungafaniyo kwesitayile kwezi ntlobo zeenwele zibenza bazame ukuzama!
Ukuphefumlelwa kunye nemibono, siye saqulunqa ezona zinwele zilungele amadoda ukuze afumane ngoku. Ukusuka ekusikeni okudala njengokufutshane ukusikwa kwe-buzz , abasebenzi abasikiweyo , ikama ngaphezulu Kunye nepompadour kwizitayile zangoku ezinje ngequiff, fringe, kunye iinwele ezimdaka , ezi zezona zinwele ziphambili zamadoda ekufanele ukuba wonke umfana azame kulo nyaka.
1Izinwele zeenwele eziPhambili
1.4Izitayile zeMohawk kunye neFaux Hawk
1.5Ikama ngaphezulu kweenwele
1.6Inwele ye-Ivy League
1.10Izinwele eziKhuselweyo eziBuyile
1.15Amacandelo amafutshane aneTop ephezulu kunye neendevu
1.16Icandelo Elinzima Ukudibanisa Ngaphezulu kwesikhumba
1.17Ukuphela okuphezulu kweCrew Crew ngeendevu epheleleyo
1.18I-Textured Crop Taper Fade kunye neendevu
1.19I-Undercut Back Undercut kunye neendevu
1.20I-Buzz Sika ukuphela
1.22Ukujiya kweenwele eziQineneyo
1.23Icandelo elisecaleni liphela
1.24Ukubhabha kweWavy Faper Tade
1.25Ukuqhuma kweFade Faw
1.26Ikama Ngaphezulu kweTaper Fade
1.27Ixesha elide eliCwangcisiweyo eliBuyayo
1.28Isicatshulwa esiTyhidiweyo esiPhelileyo kunye neNxalenye eNzima
1.29Ukuphela kweTaper Fade
1.30Iinwele eziBrashiweyo eziMva ngeeNdawo eziLide
1.31Mfutshane Blunt French Crop Fade
1.32Faux Hawk Skin Fade kunye noYilo
1.33Indoda Bun kunye neendevu
1.34Icandelo Elinzima Lesikhumba Siya Kuphela
1.35I-Messy Spiky Izinwele kunye neTaper Tade ephantsi
1.36I-Undercut Fade Pomp enentshebe
1.37Utyibilikisiwe phakathi kweMade Fade ngaphezulu
1.40Izinwele ezijiyileyo ezi-Wavy ngeTramline
1.41Icala eliMessi elitshayelwe Iinwele ezinamacala amfutshane
1.42Umbala wePompadour Fade ngeLayini
1.43I-Blonde Messy Quiff Fade kunye neendevu
1.44Cofa umva ungaQhagamshelwa
1.45Iinwele ezinamabala aMthubiweyo kunye neFemp Fade
1.46Ukujija okuBuyiselweyo kuFow
MbiniEzona mveliso zeNwele ziBalaseleyo kwaMadoda
3Izitayile zeNdlela yokuHamba yaMadoda yokuFikelela ngoku
Izinwele zeenwele eziPhambili
Esi sityalo siye sanda ngamandla kwiindawo zokucheba iinwele kwihlabathi liphela. Kuqala ukubonwa eYurophu, ukuphinda kwenzeke kuye kwasasazeka e-United States nase-Australia, apho abafana abaninzi bexabisa iinwele ezimfutshane ngokulula kunye nesitayile esikhawulezayo. Iinwele ezimfutshane ezingaphezulu ziyadityaniswa kunye nokuphela emacaleni, kunye nesitayile se-matte pomade okanye i-wax. Ukufumana Inwele yesiFrentshi yokucheba iinwele , amacala afipheleyo achetyiwe ngokwendalo ngesichebe seenwele ngelixa umphezulu osikiweyo usikwa ngesikere. Ukuhombisa iinwele zakho ezinqamlezileyo, sicebisa ukugcina iinwele zakho zithe tyaba ukuze zibukeke zifana nokunqunqwa kweqela labasebenzi kodwa ngomkhala omncinci.
Isinxibo sihlala siyinto enokuthambeka, ekhethiweyo yeenwele kuye nawuphi na umntu onesitayile. Ngobude obongezelelekileyo kumacala aphezulu kunye amafutshane aphelileyo, eyona mingeni iphambili yokucheba iinwele zale mihla ivela kwiimfuno zesitayile ezinzulu. Nangona ukujonga kokugqibela kwesi sitayile sobude obuqhelekileyo obuphakathi kufanelekile kwimizamo, uninzi lwamadoda alunalo nje ixesha okanye amandla okwenza iinwele rhoqo kusasa. Ukwenza i-quiff, sincoma ukuba uqale ngeenwele ezicocekileyo, ezomileyo. Ukuthambisa isitayile kuya kufuna isomisi somlilo kubushushu obuphezulu kunye ne-pomade, i-wax okanye i-putty ngokubamba okuqinileyo. Ukujongeka ngokungathandekiyo, sebenzisa imveliso yakho yokubumba ngokulinganayo kuyo yonke loo nto kwaye kwangaxeshanye uxukuxe umva kwaye uyomise. Emva koko, sebenzisa iminwe yakho okanye udibanise iinwele zakho endaweni oyifunayo.
Njengohlobo oluhle lwe-quiff, ipompadour iqhubekile nokuba sisigqibo esithandwayo samadoda. I-pompadour haircut uqobo ifana ngokumangalisayo ne-quiff, ngamacala amafutshane kunye neenwele ezinde ngaphezulu zizinto ezimbini eziphambili zesitayile. Ngapha koko, i ipompadour yanamhlanje Amadoda ahlala edityaniswa ne-undercut ukunika ukujonga okuhle ngaphandle kokuphazamisa imigca yale ndlela yokuvuna. Ukuhombisa ipompadour, uyakufuna imveliso eyomeleleyo yeenwele, isomisi somatshini, kunye nekama. Qala ngokusebenzisa i-wax yakho okanye ipomade . Emva koko dibanisa zonke iinwele zakho umva, ngokuthe chu ukubonelela ngokunyusa kunye nevolumu. Nje ukuba ufumane ubume obuqhelekileyo bobukhazikhazi bakho, yivuthele eyomileyo ukufaka ubushushu kwaye ugcine ubume obubhaliweyo.
uyilo oluphothiweyo lwamadoda
Izitayile zeMohawk kunye neFaux Hawk
I-mohawk kunye ne-faux hawk (aka mfondini ) ziinwele ezinemvukelo ezikhumbuza uninzi lwabafana ngee-rocker zabo abazithandayo. Inguqulelo ehlaziyiweyo yesitayile isetelwe ukuba ithandwe njengolondolozo olusezantsi kodwa ukujonga okuqhelekileyo. I-mohawk yanamhlanje kunye ne-faux hawk fade ibandakanya utshintsho olwenzeka ngokuthe ngcembe phakathi kweenwele ezinde ngaphezulu kunye namacala achetyiweyo okanye aphelileyo, kodwa isabandakanya ulwahlulo olwahlukileyo lweenwele ezinde ezihamba zisihla embindini wentloko. Ukucheba iinwele okulondolozayo okunokunxitywa kuyo yonke indawo kunye nayo yonke imihla, sicebisa ukuba ufumane ifohawk. Kwangokunjalo, ukuqhekeka kokuphela kwe-mohawk kujongeka kuyinto entsha kwaye kushushu kubantu abamnyama. Oku kunqunyulwa kunokulungiselela iintlobo ezahlukeneyo zefifti ngobude obahlukeneyo ngaphezulu.
Ikama ngaphezulu kweenwele
Nokuba ufuna ukubonakala kweklasikhi okanye okwangoku, ikama phezu kweenwele zihlala zikhetho oluhle. Izinto eziguquguqukayo kodwa kulula ukuzifumana kunye nesitayile, indlela ye- Ikama liphele Izitayile ngokwazo ngokwenxalenye yeenwele zakho. Nangona kunjalo, abafana banokufumana iindlela ezininzi zokunxiba ukubukeka ngokukodwa. Ukusuka kwisiphelo esisezantsi ukuya kwi-undercut emacaleni ukuya kubude obufutshane okanye obuphakathi obusikiweyo ngenxalenye enzima ngaphezulu, le ndlela yohlulo inika into kuwo wonke umntu. Ukuba ujonge iinwele zamvanje zamadoda ezincomayo malunga nayo yonke into imilo yobuso kunye nohlobo lweenwele, ii-comb overs kunye namacala asecaleni kufuneka ibe yenye yezona zinto uzikhethileyo kunyaka.
Inwele ye-Ivy League
Isidiliya kunye nesintu, i-Ivy League yokucheba iinwele yenye indlela yokuhamba ekunokuthi nayiphi na indoda ikhuphe ngaphandle kwemiyalelo enzima okanye umkhosi weemveliso zesitayile. Iimpawu ezahlukileyo zokunqunyulwa zibandakanya iinwele ezimfutshane ezihlukaniswe kwicala elinamacala aphelileyo. Ukugqitywa kokugcina, khetha i-taper fade ephantsi; Ngaphandle koko, ukuphela kolusu oluphezulu kunokunika iitoni zomahluko. Kwinwele yamadoda yakudala ebotshelelwe kukuchukumiseka kuseto lweshishini lobuchwephesha okanye kwiminyhadala yentlalontle, i Ivy League lukhetho olufanelekileyo. Mane ubuze umchebi wakho ngee-intshi ezi-2 ukuya kwezi-3 ngaphezulu ngolunye uhlobo lokuphela emacaleni, kunye nesitayile seenwele zakho ngokwendalo.
I-taper cut is zombini eguquguqukayo kunye nefashoni, kwaye yintoni eyenza iinwele ezinamathambo zahlukile kukuba amacala akho awanakubethwa zii-clippers, ezinje ngokufiphala, kodwa endaweni yoko isikere sinqunyiwe ukuze sijongwe ixesha elide. Ngelixa ukujonga kusaya kufutshane kancinci ukuya ezantsi kwentloko, a iinwele ezinamathambo ayiboneleli ngumahluko ofanayo nophelayo. Njengoko abanye abantu beqala ukukhetha izitayile ezinde, oku kunqunyulwa kusetelwe ukuba yenye yezona zidumileyo zonyaka.
Eyaziwa ngokuba ngumkhosi omfutshane wasemkhosini kwaye amacala akhangeleka ngathi ayila, i-crew cut is a stylish kodwa ihlala i-hairstyle yendoda yale mihla. Ngelixa umgangatho abasebenzi abasikiweyo isenokungabonakalisi buso kubo bonke ubume bobuso, ukucela i-barber yakho ukuba yongeze umahluko omncinci kunqunyiwe kunokwenza ukubonakala kulungele ubuso bakho. Umzekelo, ukuba unobuso obujikelezayo, zama iinwele ezinde kancinci ngaphezulu. Kwibunzi elikhulu, yongeza umphetho okanye icala utshayele ii-bangs zakho. Emva koko fumana ukuphela kolusu oluphezulu emacaleni ukuze ujonge ngakumbi. Nokuba ukhetha ntoni, izitayile ezisikiweyo zabasebenzi kulula ukuzifumana kwaye zilula kwisitayile.
Ngaphezulu kwehlobo, i-angular cut fringe haircut yenyuka kakhulu kwaye le nwele iya kuqhubeka nokwanda ekuthandeni. Ngokukhetha umphetho omdaka okanye othe nkqo, amadoda afumana iinwele ezinde ezenziwe ngesimbo sendalo kwi-engile. Umphezulu unokudityaniswa ne-undercut okanye i-fade ephezulu kunye nomgca. Olu jonga lukwayindlela entle yokubonisa amanqaku aphezulu. Ukuba ukhe wakruqula isitayile sakho, ungathatha iinwele ezifanayo kwaye wenze i-angular fringe.
Izinwele eziKhuselweyo eziBuyile
Ukubuyela umva yiklasikhi, iinwele ezibonakalayo ezibonakala zilungile kuninzi lwabafana. Kwi-hipster Millennials, ukubuyela umva ngendlela engaphantsi kuyeyona nto iphambili kuyo. Ukuba ukhangela indlela eyahlukileyo yokunxiba iinwele zakho ezishinyeneyo, izitayile ezibuyileyo sebenza kakuhle kuzo zonke iimeko. Elona candelo lililo kukuba ukutsala iinwele zakho ngasemva yeyona ndlela ilula yokutsala. Konke okudingayo ukuze ufezekise oku kujongeka okungenani zi-intshi ezintathu zeenwele ngaphezulu, i-undercut okanye i-fade emacaleni, ukukhanya okuphezulu okuphezulu, kunye nekama. Mane udibanise i-pomade yakho ngeenwele zakho ukuze ujongeke kakuhle.
Ukuba ngenene ufuna utshintsho kulo nyaka mtsha, ukusweleka kweenwele zakho kunokuba yindlela efanelekileyo yokuziveza. Amadoda amaninzi awathathi ziinwele ezingafakwanga umbala njengenyaniso, kodwa inokuba yeyona ndlela ilungileyo yokuqalisa ngokutsha kwaye ungeze enye into eyongezelelweyo. IPlatinam blonde , ezimhlophe, kunye neenwele ezingwevu zinokuba sisitayile esihle kunye neenwele ezifanelekileyo kunye nokubonakala. Nokuba ngowuphi umbala weenwele zakho zendalo okanye uburhabaxa, ukukhetha owona mbala mtsha uya kuyenza ibeyimbonakalo eyahlukileyo kwaye uzalise iinwele zakho.
ubude beenwele ezi-4
Amadoda aneenwele ezi-wavy ziyazi ukuba zifuna ukusikwa okukhethekileyo ukuze basebenze ngezitshixo zabo ezingalawulekiyo, ezinzima ukulawula. Kodwa endaweni yokulwa namaza endalo ezinwele zakho, sicebisa ukuba uwamkele. Ezona zinwele zipholileyo ze-wavy zezona zazibonisa obu bume bendalo. Izinwele ezi-Wavy zibonelela ngobuhle obungenakufumana nezinye iintlobo. Kodwa ukwenza nje ubomi bakho bube lula, sicebisa ukuba usike iinwele zakho zimfutshane kakhulu emacaleni. Umzekelo, zama i-bald fade okanye i-undercut eshiya ubude obulawulwayo ngaphezulu kwentloko, kodwa isabonisa ubunjani bendalo beenwele zakho.
Njengokuba kunjalo ngeenwele ezi-wavy, amadoda aneenwele ezijijekileyo anokuthambeka kwendalo ngokunjalo. Ukukhetha isitayile eshiya ubude oboneleyo entlokweni yakho ukuvumela iinwele zakho ukuba zikhule ngokwendalo ziya kukunika ukujonga okuthe tye, okujongwa edolophini okubandakanya izinto ezininzi ezahlukeneyo. Khawufane ucinge umphetho osisongelyo okanye isivuno, okanye iinwele ezimfutshane eziqinileyo ezinamacala aphelileyo. Ukuba unenkxalabo malunga neenwele zakho zi-frizzy kwisitayela eside, ezinye iinwele eziphezulu ze-wax okanye i-pomade ziya kunceda ukulawula kunye nokuthambisa naziphi na iinwele ze-flyaway zokugqiba. Khumbula, bafana abapholile Iinwele ezigobileyo inokuba zezona zikhephu zishushu, ke sukuqalekisa ii-curls zakho de ube uzamile ezi nkangeleko.
Iinwele zeSpiky zinokukukhumbuza ii-90s, kodwa iinwele zale mihla ezi-spiky zahluke ngokupheleleyo kwaye zibonelela ngendlela epholileyo yokwenza isimbo senwele ezimfutshane. Ngokongeza ubume kunye nenani elincinci lemveliso yeenwele ekuboneni isikhumba sakho sasentloko, ungasusa oku kunwele kweenwele kwabafana abancinci. Njengoko ubona kumzekelo ongentla, ulusu olusanda kutsha luphela kwaye ulayini uhamba indlela ende ekubumbeni iipikisi ngaphezulu. Kwaye njengoko imikhwa ihambela ngakumbi kwinkangeleko emdaka, iinwele ezinamabala ziya kuqhubeka ziqhelekile kwaye uboya obuthandwayo .
Amacandelo amafutshane aneTop ephezulu kunye neendevu
Iindevu ezipholileyo kunye neenwele zihamba kunye, kunye nezinye iinwele ezilungileyo zamadoda zikhangeleka ngcono nangaphezulu ngentshebe. Nokuba udibanisa iinwele ezimfutshane okanye ezinde ngaphezulu kunye nentshebe kunye namacala aphelileyo, oku kujongeka kufezekisa ulungelelwaniso olugqibeleleyo lweenwele zobuso kunye neenwele zentloko ngaphandle kokwenza ubonakale ungacocekanga okanye ungcolile. Ukubukeka kweklasi, zama i-classy slick back okanye i-quiff ye-hairstyle kunye neendevu ezinqabileyo, ezinqabileyo zesitayela somntu okhwaza i-alpha yindoda. Khawukhumbule ukukhathalela iinwele zakho zobuso ngeoyile ye-ndevu, i-balm kunye ne-wax.
Icandelo Elinzima Ukudibanisa Ngaphezulu kwesikhumba
Ukuphela kweenwele zamadoda azidanisi. Ngophawu oluphezulu lwesikhumba emacaleni kunye nekama ngaphezulu kweenwele ngaphezulu, oku kujongeka kwesitayile bekuyinto ethandwa kakhulu yindoda yokucheba iinwele iminyaka. Icandelo elinzima ligxininisa ukusika kwaye ungasitayela ukusika kunye matte pomade ukugqitywa kombhalo.
Ukuphela okuphezulu kweCrew Crew ngeendevu epheleleyo
Izinwele ezimfutshane iya kuhlala iyenye yeenwele zamadoda eziphezulu. Oku abasebenzi abasikiweyo iza ngaphambili-itshayelwe ngaphambili kwisitayile seklasi. Kodwa ukusika okuphezulu okusikiweyo emacaleni kunye nokuhamba ngokuhambelana neenwele kugcina iinwele zala maxesha.
I-Textured Crop Taper Fade kunye neendevu
Le nwele i-spiky inenqaku elibhalwe phezulu kunye I-taper emfutshane iphela emacaleni . Uhlobo lwendalo lweenwele ezimfutshane ngokwenyani lwenza ukuba oku kulunga kubonakale kulungile.
I-Undercut Back Undercut kunye neendevu
Oku ubuyele umva engaphantsi ngumzekelo obalaseleyo wesitayile samadoda sangoku. Ngeenwele ezinde ezinomqolo kunye nentshebe epheleleyo, oku kujonga kwendoda yindoda yokwenene yokucheba iinwele, nokuba iinwele ezingaphezulu zinde noko.
I-Buzz Sika ukuphela
UKUYA buzz cut cut iyaqhubeka nokuba yindawo yokucheba iinwele kuba kulula ukuyifumana kwaye kulula ukuyibeka. Nge-taper fade haircut emacaleni kunye nokucoceka, ukuqaqamba okugqityiweyo ngaphezulu, kujongeka kakuhle kubafana abaneentlobo zonke zeenwele.
I-pompadour ibe yenye yezona zinwele zidumileyo zamadoda iminyaka emininzi ngoku. Ngelixa ubukhazikhazi beklasikhi bukhazimla kwaye buqingqiwe, ipompadour yanamhlanje ibonelela ngeendlela ezininzi ngakumbi. Kunye amacala achetyiweyo , Inxalenye eshinyeneyo, kunye nentshebe eneendiza, sicebisa ukuba ubuze umchebi wakho ngale ndlela. Nangona kunjalo, yazi nje ukuba isebenza kakuhle nge iinwele ezijiyileyo .
Ukujiya kweenwele eziQineneyo
Le nwele yamadoda inezinto ezicocekileyo impandla iyaphela emacaleni nasemva ngeenwele ezishinyeneyo ezingqindilili ngaphezulu. Inkqubo ye- iinwele ezisikiweyo ziyaphela lolunye lwezona zitayile zibalaseleyo kwezi ntsuku kuba luthatha ithuba lokwenza ii-curls ezizodwa zokubonelela.
Icandelo elisecaleni liphela
Intle le icala iinwele Ngaba ubukeka beklasikhi bujonga ubulungisa. Oku kunqunqwayo komnumzana kuza nefadesi egcinayo embindini emacaleni kunye neenwele ezenziwe ngombala ezibrush zonke kwelinye icala. Ukufumana icandelo elifanelekileyo, uya kufuna ukusebenzisa ukukhanya okuphantsi okanye imveliso yeenwele ze-matte.
Ukubhabha kweWavy Faper Tade
Oku iinwele ezipholileyo zabafana ifaka i-taper ephantsi yokuphela kunye nomphetho omfutshane we-wavy. Yindlela elungileyo yokwenza isitayile ekunzima ukusilawula wavy okanye iinwele ezinekhelizi .
amadoda akama phezu kokuchetywa kweenwele
Ukuqhuma kweFade Faw
Olu luguqulelo olupholileyo oluphezulu lwe ifeksi . Ngelixa i-fohawk iphela isitayile, i-edgy haircut, yokongeza kwi-fade egqabhukileyo yenye yeendlela zokwenza ukuba ikhetheke kwaye ikhetheke. Sebenzisa i-pomade eyomeleleyo okanye i-wax yeenwele ukugcina iinwele ngomsindo kunye nesitayile imini yonke.
Ikama Ngaphezulu kweTaper Fade
Oku Ikama enesitayile iyaphela idityaniswe nenxalenye ecocekileyo kunye neendiza ezishinyeneyo. Inkqubo ye- I-taper ephantsi iphela emacaleni nasemva kuyenza ifezeke njengoko zombini ishishini lokucheba iinwele kunye nesitayile esiqhelekileyo.
Ixesha elide eliCwangcisiweyo eliBuyayo
Oku kupholile iinwele ezinde eziphakathi emadodeni ifaka i-taper fade esezantsi esikiweyo kunye neenwele ezinde ezinombala ngaphezulu. Endaweni yesiko ndibuyele emva , isitayile senziwe ibrashiyile saza sabuya saza sazisa umthamo kunye nentshukumo.
Isicatshulwa esiTyhidiweyo esiPhelileyo kunye neNxalenye eNzima
I-haffut ye-quiff yenye yeendlela ezishushu kakhulu zeenwele iminyaka. Inkqubo ye- iinwele ezilungileyo zamadoda bonisa iinwele ezinde ngevolumu kunye nokuhamba. Ngenxalenye ephantsi kunye nenzima, oku kuhle amacala amafutshane, iinwele ezinde eziphezulu ibonisa ukugqibelela.
izindlu ezithetha ukuvumisa ngeenkwenkwezi
Ukuphela kweTaper Fade
Iinwele eziBrashiweyo eziMva ngeeNdawo eziLide
Mfutshane Blunt French Crop Fade
Faux Hawk Skin Fade kunye noYilo
Indoda Bun kunye neendevu
Icandelo Elinzima Lesikhumba Siya Kuphela
I-Messy Spiky Izinwele kunye neTaper Tade ephantsi
I-Undercut Fade Pomp enentshebe
Utyibilikisiwe phakathi kweMade Fade ngaphezulu
Izinwele ezijiyileyo ezi-Wavy ngeTramline
Icala eliMessi elitshayelwe Iinwele ezinamacala amfutshane
Umbala wePompadour Fade ngeLayini
I-Blonde Messy Quiff Fade kunye neendevu
Cofa umva ungaQhagamshelwa
imveliso yeenwele ezilungileyo kakhulu zeenwele zaseAsia
Iinwele ezinamabala aMthubiweyo kunye neFemp Fade
Ukujija okuBuyiselweyo kuFow
Ezona mveliso zeNwele ziBalaseleyo kwaMadoda
Sisoloko sibuzwa malunga neepomade kunye neemveliso zeenwele ezilungileyo zamadoda. Inyani yile, iimveliso zesitayile sisixhobo esisetyenziselwa ukufezekisa ezi mbonakalo zintle, kwaye ngaphandle kwazo, abafana baya kuba nexesha elinzima lokugcina iinwele zabo zibukeka zilungile imini yonke. Nangona kunjalo, umceli mngeni kukufumana iimveliso ezilungileyo kunye neempawu ngexabiso elifikelelekayo kuhlobo lweenwele zakho kunye nobude. Ukuba ujonga ukhetho oluphezulu, nazi ezinye zeemveliso ezilungileyo zamadoda.
Enye yeemveliso zeenwele ezithandwayo kumnumzana wale mihla, ipomade inceda ukugcina iinwele zakho zisendaweni efanelekileyo ngelixa kuthintelwa ukunganyanzeleki okanye ukunamathela kwejel.
I-Suavecito Pomade yoqobo yokubamba, i-4 oz, iBrown (i-CV84) 10,173 Izinto ezithethwe ngabantu $ 12.00 Jonga iAmazon
I-Baxter yaseCalifornia Clay Pomade, iMatte igqityiwe / iStrong Hold, iinwele zenziwe ngamadoda, 2 fl. Oz 3,572 Izinto ezithethwe ngabantu $ 23.00 Jonga iAmazon
Njenge-pomade, i-wax yeenwele yenye yezona zinto zixhaphakileyo kwimveliso yesitayile yabafana. I-wax yeenwele iyacetyiswa kwindalo yendalo, egqityiweyo.
I-TIGI yeNtloko yeBhedi yaMadoda eyaHlulwa ngokuSebenza ngeWax, i-3 yeoyunce Izimvo eziyi-3,995 $ 12.99 Jonga iAmazon
I-American Crew Fibre, i-3 oz, iStrong Hold Hold kunye neShine ephantsi 18,870 Izinto ezithethwe ngabantu $ 14.40 Jonga iAmazon
Ukusebenzisa i-shampoo enobumnene, yeenwele kunye neendevu kunokukhuthaza ukukhula, ukunciphisa ukulahleka kweenwele, kunye nokugcina izitshixo zakho zisempilweni.
Iimveliso zeBrickell zaMadoda zemihla ngemihla zokomeleza iShampu yamadoda, yeNdalo kunye neOrganic equkethe iMint kunye ... Izimvo eziyi-3,690 $ 20.00 Jonga iAmazon
I-Shampoo yeeNwele zeMadoda -Iqukethe ioyile yomthi weTi ekhuthazayo- iKrieger + Söhne Man Series-Yabo Bonke ... Izimvo eziyi-2,731 $ 17.99 Jonga iAmazon
i-organic conditioner efanelekileyo iya kuzigcina iinwele zakho zithambile, zithambile, kwaye zikhangeleka ngcono kunangaphambili.
IBrickell yaMadoda yokuVuselela isiCoci seNwele saMadoda, iNdalo kunye neNdalo yokuTya iinwele ... 842 Izinto ezithethwe ngabantu $ 20.00 Jonga iAmazon
I-K + S yokuGcina iinwele kwaMadoda-Iimveliso zoKhathalelo lweNwele zeNwele zaMadoda-Zifakwe ... 888 Izinto ezithethwe ngabantu $ 19.99 Jonga iAmazon
Sebenzisa ioyile ye-ndevu ekumgangatho ophezulu kubalulekile ekugcineni intshebe esempilweni. Ukuthintela ukoma okanye uncedo ekuzilungiseni, sebenzisa ioyile yeendevu yakho yonke imihla emva kokuhlamba.
I-Amish ethembekileyo-Ioyile ye-Beard yesiqhelo-i-2 ounce Izimvo eziyi-17,510 $ 12.22 Jonga iAmazon
I-Beard yeoyile nguBrand Mounterine (2oz) | I-Barefoot (engafakwanga) | I-Premium eyi-100% yoCoci lweNdevu yendalo Iingxelo ze-6,012 $ 10.95 Jonga iAmazon
Njengeoyile yeendevu kodwa nebhotolo, intshebe yebalm iyathambisa kwaye yomeleze iinwele zakho zobuso ngelixa ibonelela ngokubamba okuyimfuneko ukuyigcina ithe tye kwaye ibhalwe usuku lonke.
Ukunyaniseka kwe-Amish Beard Balm Ikhefu-kwi-Conditioner-Yenziwe ngeNdalo kunye neZithako zeOrganic kuphela - 2 ... 27,525 Izinto ezithethwe ngabantu $ 11.43 Jonga iAmazon
I-Beard wax iyafana ne-ndeard balm kodwa nge-beeswax, ivumela ulawulo ngakumbi kunye nesitayile ngokungalawulekiyo, izitayile zeenwele zobuso ezinde.
I-Amish ethembekileyo ye-Beard Wax - Yenziwe kwiZithako zeNdalo kunye neOrganic Izimvo eziyi-3,202 $ 12.77 Jonga iAmazon
Izitayile zeNdlela yokuHamba yaMadoda yokuFikelela ngoku
Eyona ndlela ilungileyo yokucheba iinwele emadodeni iyatshintsha, kwaye ngeenwele ezininzi zamadoda ezipholileyo ukuze ufumane ngoku, uthathe isigqibo sokuba zeziphi iindlela zokusika kunye nezitayile ezilungileyo kuwe ezinokuba nzima. Kukho iindlela ezithandwayo ezihlaziyiweyo kwizitayile zakudala, emva koko kukho abachebi bezinwele abasikayo ngoku.
Ezi ndlela zokucheba iinwele ziqala ukusukela ekupheleni, kwi-taper nakwindlela engaphantsi emacaleni ukuya kwi-quiff, ikama ngaphezulu, i-faux hawk, ukubuyela umva, isityalo esenziwe ngombala, abasebenzi abasikiweyo kunye ne-mohawk ngaphezulu.
Iinwele zakho yingxelo yefashoni enokuthi yenze okanye yaphule isimbo sakho sonyaka, ke qiniseka ukuba uzama ukubukeka okwahlukileyo ukufumana okusikiweyo okulungeleyo. Nokuba uneenwele ezimfutshane, eziphakathi okanye ezinde, kukho iindlela ezipholileyo oza kuzizama.
I-125 yeeTato zoMkhono eziBalaseleyo zaMadoda
Ukuqonda i-3 yakho enkulu: Yintoni iLanga lam, iNyanga, kunye nokunyuka?
Ezona ndlela zilungileyo zokuBala kweNwele zamadoda
I-45 yeeNwele eziBalaseleyo zeBlack for Men
Iinwele ze-23 zeBarbershop
Abantwana abaPholileyo iMohawk
iinwele zomntwana zenkwenkwe
ubuso obungqukuva ukucheba iinwele amadoda
umfana oneenwele ezimhlophe
indlela yokugoba iinwele ezimfutshane amadoda
zithini izindlu ngokuvumisa ngeenkwenkwezi
amadoda aneenwele ezimfutshane asian
I-125 yeeTattoo eziLungileyo zaMadoda
Tape Up Ukucheba iinwele